🥇 ▷ Kusoo deg goobta duubista barnaamijka 'Star Wars: Knights of the Old Republic' ee loogu talagalay iPad ✅
Kusoo deg goobta duubista barnaamijka ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ ee loogu talagalay iPad
Ciyaar cusub ayaa imaaneysa App Store, waa RPG tayo sare leh oo leh ficil buuxa, oo loo tixgeliyo mid ka mid ah ciyaarta doorka ugu fiican waqti walba, ciyaarta ayaa hadda diyaar u ah iPad Xiddigaha Dagaallada: Knights ee Jamhuuriyaddii Hore.
Waxaan la kulanay afar kun oo sano kahor Boqortooyada Galactic iyo boqolaal Jedi Knights inay ku dhinteen dagaalka ka dhanka ah Sith naxariis darada ah. Waxaad tahay rajadii ugu dambeysay ee Amarka Jedi. Miyaad karayn kartaa awooda cajiibka ah ee Ciidanka ee himiladaada si loo badbaadiyo Jamhuuriyadda? Mise waxaa kugu dhibi doona dhinaca mugdiga ah? Halyeeyga, ama badbaadiye, badbaadiye ama guuleyste … go’aaminta masiirka galalas oo dhan wuxuu kugu xiran yahay adiga oo keliya!
Tilmaamaha Xiddigaha Xiddigaha: Knights of the Old Republic
Khibrad doorka Star Wars with jilayaasha gaarka ah, xayawaanada, gawaarida iyo meerayaasha.
Baro sida loo isticmaalo in ka badan 40 awoodood oo Awoodda iyo dhisidda nalkaaga.
Xayeysiinta tooska ah ee meelaha caanka ah ee Star Wars, sida Tatooine iyo Dunida Wookiees, Kashyyyk.
Xulo dhinacaaga adigoo ka dooranaya sagaal xarfood oo la beddeli karo, sida twial, droids iyo wookiees.
Ku safr sideed adduunyo oo waaweyn oo leh booskaaga Ebony Falcon.
Muuqaal la adeegsado oo la fududeeyay oo loogu talagalay shaashadda taabashada ipadka ee iPad-ka ayaa taxaddar ka dhex gelinaya tallaabada.
Xiddigaha Dagaallada: Knights ee Jamhuuriyaddii Hore Waxay ku jirtaa App Store oo waxay la jaan qaadi kartaa iPad. Wuxuu ubaahanyahay macruufka 6.0 ama wixii ka dambeeya. Waxaa lagu heli karaa luqadda: Ingiriisiga.